Boris Johnson: Enweghị ezumike oge mbụ nke mgbochi COVID-19 na UK
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Boris Johnson: Enweghị ezumike oge mbụ nke mgbochi COVID-19 na UK
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
UK ekwuola okwu ikpe coronavirus ọzọ dị 14,876 na oge awa 24 kachasị ọhụrụ, na-eweta ọnụ ọgụgụ coronavirus niile na mba ahụ na 4,732,434.
Johnson ekwuputala oge izu anọ na njedebe ikpeazụ nke ụzọ okporo ụzọ England site na mgbochi COVID-19 ruo July 19.
Ihe karịrị nde mmadụ 44.3 nọ na Britain anatala ọgwụ mgbochi mbụ nke COVID-19.
Ihe karịrị nde mmadụ 32.4 na UK anarala ọgwụ mgbochi abụọ nke COVID-19.
A gaghị enwe oge ezumike nke fọdụrụ na coronavirus restrains na UK tupu ụbọchị eme atụmatụ nke July 19, Mịnịsta Ala Boris Johnson kwuru taa.
Nkwupụta okwu ndị Britain PM bịara mgbe "ezigbo mkparịta ụka" na onye nlekọta ahụike UK ọhụrụ bụ Sajid Javid na Sọnde.
"Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ihe ịrịba ama na-agba ume na ọnụọgụ nke ọnwụ ka dị ala na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọgwụ ka dị ala, n'agbanyeghị na ha abụọ na-arịgo ntakịrị, anyị na-ahụ mmụba nke ikpe," ka Johnson kwuru n'oge njem mkpọsa na Batley na ugwu England .
“Ya mere, anyị chere na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịrapagidesi ike na atụmatụ anyị iji nwee akọ ma bụrụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha, jiri izu atọ na-esote ma ọ bụ karịa mezue ihe niile anyị nwere ike wepụta maka mwepu ọgwụ mgbochi a - nde 5 ọzọ anyị nwere ike ịbanye n'aka ndị mmadụ July 19, ”ka o kwuru.
“Mgbe ahụ kwa ụbọchị nke gafere, ọ na-apụtawanye ìhè nye m na ndị ndụmọdụ ndụmọdụ sayensị anyị niile na anyị nwere ike ịnọ n’ọnọdụ na Julaị 19 iji kwuo na ọ bụ ya bụ njedebe na anyị nwere ike ịlaghachi ndụ dịka ọ dị na mbụ KPIDR as ihe ruo ókè o kwere mee. ”
Javid kwuru na ya chọrọ ịhụ njedebe nke mgbochi ngwa ngwa o kwere mee mana ọ bụla easing ga-abụ "irreversible".
Britain akukoro ihe ozo 14,876 coronavirus na oge 24 nke ohuru, na-eweta onu ogugu coronavirus na mba a rue 4,732,434, dika onu ogugu ndi oru weputara na Sunday.
Obodo ahụ dekọkwara ọnwụ ndị ọzọ metụtara coronavirus, na-eweta ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ ndị metụtara coronavirus na Britain na 11. Ọnụọgụgụ ndị a gụnyere naanị ọnwụ nke ndị nwụrụ n'ime ụbọchị 128,100 nke ule mbụ ha.
Johnson ekwuputala igbu oge izu anọ na njedebe ikpeazụ nke ụzọ okporo ụzọ England site na mgbochi COVID-19 ruo na July 19, n’etiti oke ịrị elu nke ụdị Delta dị iche iche akọwapụtara na India.
Ihe karịrị nde mmadụ 44.3 nọ na Britain anatala mgbochi mbụ nke ọgwụ mgbochi COVID-19 na ihe karịrị nde mmadụ 32.4 anatala ọgwụ abụọ, ọnụọgụ ndị ọhụrụ gosipụtara.